COVID-19 ကာလ စင်ကာပူ ပြည်တွင်းခရီးသွားများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချနိုင်ရန် ခရီးသွားအာမခံအသစ်များမိတ်ဆက် - Logistics Guide
Changi Airport Group (CAG) နှင့် Singapore Tourism Board (STB) တို့သည် Emerging Stronger Taskforce Alliance for Action (EST-AfA) ၏ကိုယ်စား ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ဆန်းသစ်သော ဧည့်အတွေ့အကြုံများရရှိစေရန် အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များသည် စင်ကာပူရှိ COVID-19 နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ပြည်တွင်းခရီးသွားအာမခံကို ၀ယ်ယူနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကို ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
အာမခံကုမ္ပဏီသုံးခုဖြစ်သည့် AIG Asia Pacific Insurance Pte. Ltd.၊ Chubb Insurance Singapore Limited နှင့် HL Assurance Pte. Ltd. တို့သည် COVID-19 နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆေးကုသမှုနှင့် ဆေးရုံတက်ကုသမှုများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး S$30,000 ထောက်ပံ့ပေးသော ခရီးသွားအာမခံအစီအစဥ်များကို စီစဥ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာနမှ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများရှိ ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်များ၏ COVID-19 ကုသခံယူမှု ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ပျမ်းမျှကိုအခြေခံ၍ အနည်းဆုံး S$30,000 အကျုံး၀င်မှုသည့်အာမခံကို ရယူရန်တိုက်တွန်းလျက်ရှိကာ စင်ကာပူသို့ Safe Trave Lanes အမျိုးမျိုးမှ ဝင်ရောက်လာသည့် ပြည်တွင်းခရီးသွား နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များသည် စင်ကာပူတွင်ရှိနေစဥ် COVID-19 ကူးစက်ခံရသည်ဟုသံသယရှိလျှင် သို့မဟုတ် COVID-19 အတွက် ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်လာလျှင် ဆေးကုသမှု၊ ဆေးစမ်းသပ်မှုများနှင့် သီးခြားနေထိုင်စေခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်အပြည့်အဝကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် သိလျှင်သိချင်းပင် ကုန်ကျစရိတ်အချို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းခရီးသွားအာမခံအစီအစဥ်ကို ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခရီးသွားအာမခံအသစ်များသည် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ခရီးသွားလာခြင်းများကို ပြန်လည်စတင်နိုင်စေရန် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပြည်တွင်းခရီးသွားအာမခံအစီအစဉ်များအတွက် ပရီမီယံများကို SGD5.35 (အထွေတွေရောင်းဝယ်ရေးအခွန်အပါအ၀င်) မှစပြီး အာမခံထားသူများ၏ သက်ဆိုင်ရာ၀ဘ်ဆိုဒ်များမှ တိုက်ရိုက်၀ယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။